Shina Orinasa Fisoratana Anarana: Guangzhou, Shanghai, Beijing, Shenzhen - Ny mpisolovava ao Shina. Shinoa rehetra ny mpisolovava an-tserasera.
Tanteraka Vahiny Tompon'ny Orinasa (WFOE)
Alohan'ny hanombohana ny raharaham-barotra amin'ny Shina, dia efa mahafantatra izay ny safidyIreo Mpampiasa vola vahiny amin'ny ankapobeny hanorenana raharaham-barotra fisiany ao Shina ao amin'ny iray amin'ireo fomba dimy. Fiaraha-miasa Enterprise (PE). Ny solontenan'ny Birao efatra. Mpiara-Barotra sy. Ny fahasamihafana eo amin'ny tsirairay ireo dia mamintina ireto: dimy fomba ny raharaham-barotra fanatrehana ao Shina. Tsy Nandoa ny Renivola takiana satria ho an'ny mpampiasa vola vahiny mba hametrahana ny Consulting, ny Varotra sy ny Teknolojia Vaovao raharaham-barotra, sns. amin'ny Shina Mba jereo ny rohy manaraka ireto ho an'ny antsipirihany sy ny fanavaozana ny fomba fiasa mikasika ny fisoratana anarana ny dimy isan-karazany i Shina rafitra: Tsy misy. kely indrindra voasoratra renivohitra dia takiana ho an'ny WFOEs amin'ny sehatra fandraharahana ny consulting, ny Varotra, retailing, vaovao ny teknolojia sns.
Tsy misy vola-ny renivola dia takiana
Misy ny kely indrindra voasoratra renivohitra mbola ilaina ho an'ny orinasa sasany ohatra: Banky, Nanatitra sns. Vahiny Vola Fiaraha-miasa Enterprise (FIPE) mety mendrika miezaka raha ny mpampiasa vola tsy te-hametraka zavatra betsaka renivohitra mba hanorina ny orinasa ao Shina, jereo ny antsipirihany kokoa momba ny FIPE eto Aorian'ny Shina ny teny ny WTO, ny ankamaroan'ny orinasa ao Shina tonga soa eto amin'ny fampiasam-bola vahiny. WFOE fametrahana ao Shina lasa ny safidy voalohany ho an'ny mpampiasa vola vahiny (fa tsy ny Rep. Birao) ao Shina Tao ny hoe fotoana ho an'ny hetra tanjona, mahomby fahazoan-dalana rafitra, ary ny antony hafa bebe kokoa ireo mpampiasa vola ampiasaina Hong Kong toy ny mihazona ny orinasa mampiasa vola ao amin'ny tanibe Shina, mampiasa izany offshore orinasa mba hanao ny asa ao Shina.
Shina an'i Shina ny manolotra fahafahana lehibe ho mpampiasa vola avy amin'ny manerana izao tontolo izao.
'Tsy misy firenena ho an'ny fandraharahana tahaka an'i Shina. Zavatra mandeha fotsiny izany haingana be noho ny any amin'ny ankabeazan'ny faritra hafa manerana izao tontolo izao', araka Marc van der Chijs, teo aloha anarana serial mpandraharaha ao Shanghai, jereo ny lahatsoratra eto raha ny momba ny fandraharahana Sinoa: Raha ilaina, dia hanampy anao amin'ny dingana rehetra ao mba ho anao hahomby ao Shina.
Fananganana orinasa ao Shina dia mety ho tena sarotra raha tsy zatra Shinoa ny lalàna sy ny fepetra isan-karazany ny manam-pahefana.
Ny matihanina mpanoro-hevitra hanampy ny orinasa vahiny hanorina ao Shina ao amin'ny tena vola lany amin'ny fomba mahomby.
Manomboka eo amin'ny, afaka mahazo ny Shina solontenan'ny birao (RO) voasoratra anarana. The fonosana dia ahitana ny birao sy ny hetra fisoratana anarana, ny kaonty banky fanokafana, ny fahazoan-dalana amin'ny asa, ny taona iray fonenana visa sy ny hetra consulting asa fanompoana ho an'ny voalohany iray volana Manomboka amin'ny USD, roan-jato ianao dia afaka mahazo Tanteraka ny Vahiny Tompon'ny Orinasa (WFOE) voasoratra anarana. The fonosana dia ahitana rehetra ofisialy fampiharana(izany hoe raharaham-barotra ny taratasy fangatahana fahazoan-dàlana, ny hetra fampiharana, ny kaonty banky fampiharana) Mba jereo ny antsipirihany mikasika ny asa fanompoana eo an-kavanana ambony sakafo na hifandray antsika eto ambany ity, izay iray amin'ireo solontena dia hifandray aminao fotoana fohy. Nandritra ny folo taona, ny Lalana ho an'i Shina dia matetika no nidera ny feno ny vaovao fa isika dia mizara amin'ny rehetra ny namany sary mpitsidika. Na izany aza, dia mety ho mbola maro ny fanontaniana rehefa avy mianatra ny namany sary sy ny soso-kevitra. Ho an'ny fangatahana manokana, ianao no nandray anjara ny consulting fanompoana izay mety anisan'izany ny orinasa rafitra mpanolo-tsaina, hetra tetika fandrindrana, ny Shinoa mpiasa fanajana ny didy amam-pitsipika, mialoha ny tsena teny fianarana. Nifanatrika ny fivoriana manomboka amin'ny USD roan-jato isaky ny fivoriana (Indrindra hours amin'ny Faritra Mpitantana miaraka mihoatra ny dimy ambin'ny folo taona ny fampiasam-bola amin'ny traikefa). Mialoha ny tsena teny feasilbility tatitra manomboka eo amin'ny (toerana fampitahana, ny fampiasam-bola rafitra soso-kevitra, ny tany na ny atrikasa pricing fanadihadiana) Consulting saran'ny ho raisina ho toy ny ampahany fampidirana sarany raha toa ka amin'ny farany manao ny taona iray fonosana ny asa fanompoana. Araka vao haingana nohavaozina Shinoa ny Fampiasam-bola Vahiny Sokajy ity taona, raha tsy ny raharaham-barotra iharan'ny manokana ny fankatoavana toy izany fialam-boly、ny fitantanam-bola、kolontsaina mifandray sy fanamboarana.
Ara-dalàna consulting、teknolojia sy ny orinasa ara-barotra fotsiny dia afaka nanangana ny orinasa tsy be sakana.
Ny saran'ny dia tokony ho efa-polo amby dimam-polo ambany ampitahaina amin'ny Lalàna Iraisam-pirenena Orinasa izay dia afaka manome io karazana asa fanompoana. Fampiharana antontan-taratasy tsy mila mpisolovava ny hamerina ny maha-izy ny governemanta ny fitsipika endrika.